स्थानीय सरकार र शिक्षकको सहकार्य : सुधारको अवसर – DeviRam Acharya
By devadmin	 On १७ माघ २०७४, बुधबार १७:५२
प्रदेश नम्बर दुई बाहेकका स्थानीय सरकारहरू गठन भएको छ महिना पुगिसकेको छ । केही स्थानीय सरकारहरूले शैक्षिक सुधारका लागि छलफल, वहस र अन्र्तक्रियाहरु गरिरहेका छन् । छलफल, वहस तथा अन्र्तक्रिया हुनु आफैमा सकारात्मक पक्ष हुँदा हुँदै यस्ता छलफल वहस र अन्र्तक्रियामा कक्षाकोठाको सिकाइका कुराले प्राथमिकता पाएका छैनन् । कक्षा ३ मा पढ्ने विद्यार्थीले अक्षर चिन्न नसक्ने, शब्द पढ्न नसक्ने, कक्षा ५ का विद्यार्थीले गणितका सामान्य क्रिया (जोड, घटाउ, गुणन) गर्न नसक्ने विषयहरू वहस अन्र्तक्रिया र छलफलका मुद्दा बन्न सकेका छैनन् ।
(ख) गाँउपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रमा भएका जम्मा शिक्षक र जम्मा विद्यार्थीको सङ्ख्या यकिन गर्ने । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात के छ ? कक्षा ६ भन्दा माथि सञ्चालन भएका विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था कस्तो छ । शिक्षकको उपलब्धता के छ ? पहिचान गरी शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने ? नयाँ शिक्षक आवश्यक छ छैन ? आवश्यक छ भने कति शिक्षक आवश्यक छ ? कुन कुन तहमा कुन कुन विषयका शिक्षक आवश्यक छ ? पहिचान गरी व्यवस्थापनका विकल्पहरूको वारेमा वहस, अन्र्तव्रिmया छलफल गर्ने ? स्थानीय सरकार आफैले व्यवस्थापन गर्न सक्ने कति हो ? व्यवस्थापन गर्न नसके प्रदेश वा केन्द्र सरकार कसले व्यवस्थापन गर्ने हो ? अर्को छिमेकी गाँउपालिका वा नगरपालिकामा शिक्षक सङ्ख्या बढी छ कि ? सरुवा गरेर ल्याउन सकिन्छ ? यस्ता विकल्पहरू अध्ययन गर्नुपर्छ । विद्यालयमा पर्याप्त, दक्ष र उत्प्रेरीत शिक्षकविना सिकाइ स्तरमा सुधार हुन सक्दैन् ।
(ग) ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको समस्या विद्यार्थी उपस्थिति पनि हो । यसका लागि स्थानीय सरकारहरूले अभिभावकसँग अन्र्तक्रिया छलफल गर्ने तथा सुधारका लागि पहल गर्नु आवश्यक छ । विद्यार्थीको अनुपस्थितिका लागि विद्यार्थी आफैँ, परिवार, शिक्षक तथा विद्यालय कारकतत्वका रुपमा रहेका हुन्छन् । कुनै पनि विद्यार्थी के कारणले विद्यालय उपस्थिति हुँदैन भन्ने पहिचान हुनु आवश्यक छ । कतिपय कमजोर विद्यार्थीको विद्यालय उपस्थिति कम हुन्छ । यसको कारण भनेकै उनीहरू पढाइमा कमजोर हुनु हो । यसका लागि शिक्षक र अभिभावकको सहकार्य जरुरी हुन्छ भने कतिपय शिक्षकका व्यवहारले विद्यार्थी अनुपस्थित हुन्छन्, कतिपय साथीहरूकै कारण पनि अनुपस्थित हुन्छन् । हरेका विद्यालयको विद्यार्थी उपस्थिति दर कस्तो छ ? त्यो समस्या हो होइन ? र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने पहिचान गरी सुधारका उपाय अबलम्बन गर्नु जरुरी छ ।
एकजना शिक्षकले पठनपाठन हुने १९० दिनमा हरेक दिन ५ मिनेटमात्रको समयलाई वेवास्ता गर्दा १९० x ५ = ९५० मिनेट हुन्छ । ९५० मिनेट भनेको ४५ मिनेटको एक घण्टी मान्दा २१ घण्टी हुन आँउछ । २१ घण्टी भनेको एक शिक्षकले एकदिनमा ७ घण्टी पढाउने भए ३ दिन बराबर हुन आउँछ । यदि यति समयलाई गुणस्तरीय समय मान्ने हो भने हरेक विद्यार्थीलाई परीक्षामा सोधिने एउटा ३ देखि ५ अङ्कभारसम्मको प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने बनाउन सकिन्छ ।